Ugboro ole ka Wright Brothers mere? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Themụnna ndị a dị egwu ha mepụtara igwe - kedu ka ị si ekpebi
Themụnna ndị a dị egwu ha mepụtara igwe - kedu ka ị si ekpebi
Ugboro ole ka Wright Brothers mere?
300 ịnyịnya ígwè
mmiri ara ehi almond na cancer
Lelee FreeSchool! Taa, anyị ga-amụtakwu banyere ndị nchepụta ama ama na ndị ama ama, Orville na WilburWright. Orville na Wilbur Wright, ndị a na-akpọkarị Wright Brothers, bụ ndị a kacha mara amara dị ka ndị mbụ mepụtara ihe ịga nke ọma na-arụ ma na-efe ụgbọ elu dị arọ karịa ikuku, na-agbanwe njem, azụmahịa na agha gburugburu ụwa. Amụrụ Wilbur Wright, nwanne nwoke nke okenye, na Eprel 16, 1867 na nso Millville, Indiana.
A mụrụ Orville Wright, nwanne nwoke nke nta, na August 19, 1871 na Dayton, Ohio. Ha bụ mmadụ abụọ n’ime ụmụ asaa Milton Wright, bụ́ ụkọchukwu. Mụnna ahụ tolitere na Indiana na Ohio, ma kwaga ọtụtụ oge n'oge ha bụ nwata.
Nna ya na-eme njem ọtụtụ mgbe, na 1878 ọ laghachiri site na njem na helikopta egwuregwu ụmụaka maka ụmụ ya. A na-eji ike roba eme ya ka ọ gbanwee ya na ụmụ okorobịa na-egwu ya ruo mgbe ọ gbawara. Mgbe ahụ, ha rụrụ helikọpta nke ha.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ụmụnne Wright kwuru na egwuri egwu a mere ka ha nwee mmasị na ụgbọ elu. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke abụọ ahụ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ nweghị nke gụsịrị akwụkwọ. Na 1889 Orville wuru ụlọ obibi akwụkwọ nke ya, site na enyemaka nke nwanne ya nwoke bụ Wilbur, wepụtara otu akwụkwọ akụkọ.
Akwụkwọ akụkọ ahụ enwechaghị ihe ịga nke ọma, na 1892, ụmụnna mepere otu ụlọ ahịa na-ere ma na-edozi ya. Afọ ole na ole mgbe e mesịrị, na 1896, ha malitere ịme igwe nke ha. Ka ọ dịgodị, ndị mmadụ n’ụwa nile ji igwe eji efe efe nnwale.
Onye ọkwọ ụgbọelu German ahụ bụ Otto Lilienthal mere ọtụtụ ụgbọ elu na-aga nke ọma yana ndị gliders, dị ka onye mbụ. Ọ nwụrụ mgbe onye na-efe efe ya dara na 1896. N’otu afọ ahụ, onye Amerịka bụ Samuel Langley mere ụgbọ elu na-adịghị anya n’otu ụgbọelu na-enweghị ụgbọelu nke obere injin uzuoku na-agba.
Ihe omume abụọ a mere ka ụmụnne Wright gbaa ume, ha wee malite nyocha siri ike banyere igwe na-efe efe na 1899. Ha chere na Otto Lilienthal nwere echiche ziri ezi na ndị na-agba ya, mana ọdịda ya gosiri ha na ụzọ dị mma nke isi na-achịkwa. Ha ji nlezianya na-ele nnụnụ ndị na-efegharị, na-ahụ ụzọ ha si agbatị nku ha ịgbanwe ebe ikuku na-aga.
Wilbur wuru otu nnukwute nnụnụ iji nwalee echiche ụmụnna ahụ na ịgbagọ ma ọ bụ ịgbagọ nku ga-eme ka ha nwee ike iduzi ya, ọ gara nke ọma. Na 1900, Orville na Wilbur gara Kitty Hawk, North Carolina iji nwaa ndị na-egbu mmiri. Ha họọrọ Kitty Hawk n'ihi na o nwere ikuku siri ike, na-akwụsi ike yana oke osimiri aja maka ebe dị nro.
Emere ọtụtụ nnwale mbụ nke ụgbọ elu ahụ site na iji eriri kee ya dị ka egbe ma na-enweghị onye nọ na ya. Glider ahụ emeghị ihe ha tụrụ anya ya, ụmụnna wee laghachi Dayton, Ohio iji gbalịa ọzọ. Na 1901, ha laghachiri Kitty Hawk site na iji ihe nkedo gbanwere ma mee njem iri na abụọ na ya, kpuchie mita 122 na ụgbọ elu ya kachasị ogologo, onye na-atụgharị ụgbọ mmiri ahụ abụghị ihe ụmụnne Wright gbakọrọ.
Mgbe ha laghachiri Ohio, ha wuru ọwara ikuku ma nwalee ọtụtụ eriri dị iche iche iji hụ ndị na-agaghị ebi ndụ kacha mma. Ọrụ a siri ike rụpụtara: mmịpụ ahụ ha nwalere na 1902 mere nke ọma karịa ụdị ndị gara aga. Ha gbakwunyekwara roudder nwere ike ime ka ikike ha nwere iduzi ma jikwaa ọfụma ha nke ọma ma dịkwa njikere ịrụ ụgbọ elu nwere ume.
lemond anyịnya igwe
N’afọ 1903, ha rụrụ ụgbọelu akpọrọ Wright Flyer, ya na injin na mmanụ ala. Na Disemba 17, 1903, Orville Wright duziri Wright Flyer maka ụgbọ elu mbụ nke akụkọ ihe mere eme. I mere ya! Agbanyeghị na ụgbọ elu ahụ were naanị sekọnd iri na abụọ, kpuchie mita 37 wee bulie ụgbọ elu ahụ naanị mita atọ n'elu ala, ọ bụ oge mbụ na akụkọ ntolite nke onye ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma na-eduzi ụgbọ elu dị arọ karịa nke aka ha. ụgbọ elu ha, mana n'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ha, ha gbalịsiri ike ime ka ndị mmadụ kwenye na ha mepụtara ihe bara uru.
Otutu ndi mmadu ekwenyeghi na ya. Na 1908 ha malitere igosi ụgbọ elu ha n’ihu ọha na Washington DC na France, ụmụnna Wright ghọrọ ndị ama ama n’ụwa niile ozugbo. Ha malitere iwu na ire ụgbọelu ma hiwe ụlọ ọrụ akpọrọ Wright Company.
Ha rere ndị agha US ụgbọ elu, guzobe ụlọ akwụkwọ ụgbọ elu, ọbụnakwa mee ka mbufe mbufe ikuku na akụkọ ntolite.
Na 1912, Wilbur Wright dara ọrịa wee nwụọ mgbe ọ dị afọ 45. Ọ lụbeghị nwanyị ma mụta nwa. Ozugbo ọ kwuru na ya enweghị oge maka ma ụgbọ elu.
Mgbe Wilbur pụọ, Orville weghaara njikwa ụlọ ọrụ ha, mana ọ bụghị onye ọchụnta ego nwanne ya nwoke abụrụla, na 1915 Orville rere The Wright Company na Kọmitii Advisory National maka Aeronautics na Aeronautical Chamber of Commerce. Na 1944, ihe karịrị afọ 40 ka ụgbọ elu mbụ ahụ a ma ama, Orville Wright mere ụgbọ elu ikpeazụ ya na ụgbọ elu - Lockheed Constellation, af ass nke mbụ Wright Flyer. Orville nwụrụ site na nkụchi obi na Jenụwarị 30, 1948.
Ọ dị afọ iri isii na isii. Dị ka Wilbur, ọ lụbeghị nwanyị ma lie ya na Dayton, Ohio n'otu atụmatụ ahụ nwanne ya nwoke mere. Taa, a na-ahụta Orville na Wilbur Wright dị ka ndị ọsụ ụzọ ụgbọelu na ndị na-echepụta ihe mere ka njem ụgbọ elu kwe omume, nwee olile anya na ị nwere ọ todayụ taa ka ị mụta banyere Wright Brothers! Lee gị oge ọzọ!
Kedu ihe Wright Brothers chepụtara na mgbe?
N'ime afọ ndị ha kacha rụpụta afọ 1896 ruo 1900, Wilbur na Orville wuru ihe dị ka narị atọigwema rite $ 2,000 ruo 3,000 kwa afọ. Modeldị ha kachasị elu, Van Cleve rere $ 65.
Kedu ihe ndị ọzọ Wright Brothers mepụtara?
Na December 17, 1903, Wilbur na OrvilleWrightmere ụgbọ elu dị mkpirikpi ugboro anọ na Kitty Hawk na ụgbọ elu mbụ ha nwere ume. NaWmụnna nwoke na-amaghị nwokenweremepụtakwarambụ ụgbọelu na-aga nke ọma.
Ego ole ka igwe Wright Brothers bara?
N'etiti ọtụtụ ihe okike ha, ha wuru 1902Wrightglider, nke bụ ihe mbu na-achịkwa glider na a ibughari RUDDER nke na-enye ohere ka onye na-anya ya nwekwuo ike ịchịkwa yaw, yana 1905Wright flyer, nke bụ igwe mbụ na-efe efe.
Ogologo oge ole ka ụgbọ elu mbụ gara?
Near Kitty Hawk, North Carolina, Orville na Wilbur Wright na-eme ihembụịga nke ọmaụgbọ elun'akụkọ ihe mere eme nke ikuku na-ebugharị onwe ya, nke dị arọ karịa ikukuugbo elu. Orville duziri mmanụ ụgbọ ala nke na-enye mmanụ ụgbọ ala, nke na-ebu mmanụ, nke na-akwụgo elu ruo sekọnd 12 ma kpuchie 120 ụkwụ na yainaugural ofufe.
Nye bụ onye mbụ na-agba ọsọ?
Ee, Orville na Wilbur Wright merembụachịkwa, kwadoroụgbọ elu ụgbọ eluna Kitty Hawk na North Carolina's Outer Banks na Dec. 17, 1903. Ihe ngosi a bụ ihe na-etu ọnụ na North Carolina, nke gosipụtara na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na akwụkwọ ikike ọkọlọtọ nke na-anọgide na nhọrọ.27bọchị 27 2018
Nye bụ onye mbụ fere?
Nke mbụa na-achịkwa, na-akwado ụgbọ elu n'ụgbọelu a na-arụ ọrụ: Orville Wright mere na Wright Flyer na Disemba 17, 1903, mgbe ha mere njem 37 m (120 ft).Nke mbụokirikiri nke ụgbọ elu a na-arụ ọrụ: nke Wilbur Wright mere bụ onye fere 1,240 m (4,080 ft) n'ihe dị ka otu nkeji na ọkara na Septemba 20, 1904.
ihe ize ndụ nke nri nri gluten
Ego ole ka Wright Flyer efu?
NaWright Flyer na-efuiheụmụnnaihe na-erughị $ 1,000 (ihe dị ka $ 28,000 na dollar taa) iji wuo, nke ha ritere site na uru ahịa azụmaahịa ha. Ihe ngosi mbu nkeWright flyerefe elu 852 ụkwụ, na na mgbanwe ọ na-efe efe karịrị nke 40 kilomita.Mar 14 2020
Nye bụ nwanyị mbụkwọ ụgbọelu fere ụwa niile?
Nkwupụta mgbasa ozi nke National Aeronautic Association, nke ụbọchị Eprel 18, 1964, kwupụtara na Geraldine 'Jerrie' Mock ka ghọrọnwanyi mbukaofufenaanịgburugburu ụwa.
Onye bu onye izizi fefere n’uwa?
Onye ọkwọ ụgbọ elu America Wiley Post laghachiri na Floyd Bennett Field na New York, ebe ọ na-efe naanị yagburugburu ụwana ụbọchị 7, awa 18, na nkeji 49. Ọ bụ yambụaviator iji mezuo ihe ọma.
Ebee ka ụmụnne Wright rere igwe kwụ otu ebe ha?
Rightlọ Ahịa okirikiri Wright. Wilbur na Orville Wright ji ụlọ ịnyịnya ígwè ha Dayton, Ohio, pụta n’ụlọ a site na 1897 ruo 1908. Themụnna rere ma rụzie igwe kwụ otu ebe, ọbụnakwa mepụta ụdị n’usoro nke ha.
Kedu ihe ụmụnne Wright jiri rụọ ụgbọ elu ha?
N’afọ 1896, ha bidoro rụwa ụdị ịnyịnya ígwè ha. Ahụmahụ ụmụnna ndị Wright nwere banyere ịnyịnya ígwè nyeere ha aka nyocha ha banyere ịgbapụ. Ha ji teknụzụ ha mụtara n’ahịa ịnyịnya ígwè ha na ụgbọ elu ha: ụdọ, ihe ndozi, waya ndị a na-ekwu okwu, bọl bọl, na ebe a na-agba ịnyịnya.
Kedu ka ndị Wrights si jiri ego sitere na ụlọ ọrụ Wright Cycle?
Ndị Wrights jiri uru sitere na ụlọ ọrụ Wright Cycle kwụnye ụgwọ nnwale maka ụgbọelu ha. Na 1901, ha kwụnyere ụkwụ igwe ịnyịnya nke atọ na-agbada n'elu ụkwụ ihu nke otu ịnyịnya ígwè St. Clair ha ma jiri ngwa ahụ dị ka ikpo okwu nyocha iji mụọ imewe ikuku.